Kadib Bakayoko qorshaha AC Milan ee suuqa kala iibsiga Cayaartoyda? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kadib Bakayoko qorshaha AC Milan ee suuqa kala iibsiga Cayaartoyda?
(13-8-2018) Kooxda Kubada Cagta AC Milan ayaa lacadeeyey in ay heshiis lagaartay Cayaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Chelsea Bakayoko kaas oo gaaray Magaalada milano si uu Tijaabo caafimaad u maro.
AC Milan ayaa sidoo kale lacadeeyey in ay sii wadi doonaan qorshahooda suuqa kala iibsiga iyaga oo doonaya in ay soo qaateen Weeraryaahnka kooxda Villarreal ee lagu Magacaabo Samu Castillejo.
Naadiga AC Milan ayaa doonaya in ay ku iibsadaan Samu Castillejo €18 million oo lagu daray Weeraryahanka dalka Colombia ee Carlos Bacca balse Villarreal ayaa dooneysa in ay helaan lacag dhan €25m oo kaasha ah.
Samu Castillejo oo ah Weeraryahan 23 sano jir ah ayaa wacdaro dhigay Xili cayaareedkii lasoo dhaafay kadib markii uu kooxdiisa u dhaliyey 6 Gool 8 na uu caawiyey waxaana doon doonaya kooxo badan oo yurub ah.
Leonardo iyo Paolo Maldini oo ah Raga hogaaminaya in AC Milan ku soo laabato kooxdii layaqaanay isla Markaana ay dheesho koobka Champions League ayaa wada qorsheyaal fara badan oo ay ku doonayaan Cayaartoy tayo leh oo soo celiya Milantii layaqaanay.